အလေးထားဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေသည်မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုပြဿနာဖြစ် - Yangon Media Group
”မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအနေနဲ့ လက်ရှိရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှု ပြဿနာများထဲမှာ လေထု ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာဟာ ဦးစားပေးအနေနဲ့ အရေးတကြီး အလေးထားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ် ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကိုဟင်းလင်းပြင်မှာ မီး ရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းက လေထုကိုညစ် ညမ်းစေပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အပေါ်ထိခိုက်မှုကလည်း အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့အပြင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည့်အတွက် တား ဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြား လိုက်သည်။
ကိန်းဂဏန်းများအရ မြို့ပြ ဒေသများတွင် နေထိုင်သည့်လူဦး ရေထက်ဝက်ကျော်သာ သန့်ရှင်းသည့်လေကို ရှူရှိုက်ခွင့်ရကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လေ့လာဆန်းစစ် ချက်များအရ လေထုညစ်ညမ်းမှု ကြောင့် အချိန်မတိုင်ခင်သေဆုံးသူများအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးအ တိုင်းအတာဖြင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစ ရိတ်မှာ ၂ဝ၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ ထရီလီယံမှ ၂၅ ထရီလီယံအထိ ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် မိမိတို့အသက်ရှင်နေထိုင် ရေးအတွက်သန့်ရှင်းသည့်လေကို ရှူရှိုက်ခွင့်ရရှိရန် အရေးကြီး ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့် ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွား သည်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ ဆောင်ပုဒ်မှာ ”သန့်ရှင်းသောလေကိုရှူရှိုက် နိုင်ဖို့ လေထုညစ်ညမ်းမှု တိုက်ဖျက် စို့” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် စီရင်စုတွင် အိမ်မဲ့ရာမဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် သမားများ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုး??
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အောင်ဘာလေထီ လက်မှတ်အားလုံး ကုန်စင်အောင် ရောင်းချနိုင်သဖြင?
မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် ချင်းပြည်နယ် ကျီခါးမြို့တွင် နယ်စပ်ဈေးတည်ဆောက်မည်